I-Sony BDP-S350 I-Blu-ray Disc Player - Iphrofayela yomkhiqizo
Ithebula Lasekhaya Iziqondiso namaTutorials
Ifomethi ye- Blu-ray iyinhlangano ye-disc yokucacisa ephezulu yencazelo yamanje. I-Blu-ray isebenzisa i-Blue Laser nekhono lobuchwepheshe bokucindezela ividiyo ukuze lifinyelele ukudlala ividiyo ephezulu yokudlala kwi-disc yesayizi efanayo njenge-DVD evamile. Ngaphezu kwalokho, ifomethi ye-Blu-ray disc ifaka amafomethi omsindo we-high-definition audio, i- Dolby Digital Plus , i- Dolby TrueHD , ne-DTS-HD, kanye ne- PCM engaxhunyiwe ye-Multi-Channel.
I-Sony BDP-S350 I-Blu-ray Disc Player:
I-Sony BDP-S350 ivumela i-high-definition yeqiniso (720p, 1080i. 1080p) ukudlala kwama-Blu-ray ama-discs amasha. Futhi, i-BDP-S350 ingadlala emuva ama-DVD ajwayelekile afinyelele ku-1080p upscaling ngeziphumo zayo ze-HDMI. Ngaphezu kwalokho, i-BDP-S350 ingasetshenziswa futhi ukudlala ama-CD ajwayelekile alalelwayo, kuhlanganise neCD-R / RW. Esinye isici esithuthukile se-BDP-S350 yukuthi ihambisana ne-Blu-ray Format 1.1 standard, ne-built-up in iphrofayli eProfiles 2.0 nge-firmware update .
Ukuhambisana kwe-Blu-ray Profile:
Phezu kokukhululwa kwayo kokuqala, i-Sony BDP-S350 iyahambisana ne-Profile 1.1 imininingwane (BonusView), evumela ukufinyelela kokuqukethwe okusekelwe kwi-disk, kanye nezici ze-disc ezisuselwa ku-Picture, njengezithombe ezibukwayo ngesikhathi esisodwa.
Ngaphezu kwalokho, lo mdlali unesidingo esikhulu se-ethernet ne-USB port (ngokungeza amandla ememori yangaphandle nge-flash drive) ukuze afake ukuthuthukiswa kwe-firmware nokuhambisana nokuhambisana nokucaciswa kwe-Profile 2.0 (BD Live), okufaka ukufinyelela kwi-intanethi- okuqukethwe okuhlobene okuhlobene okuhlobene ne-Blu-ray disc edlalwa.
Ukukwazi ukudlala ividiyo:
I-Sony BDP-S350 idlala ama-Blu-ray ama-disc, i-DVD ejwayelekile, i-DVD-R, i-DVD-RW, i-DVD + RW, nama-DVD-RW. Ngaphandle kokukhipha kwe-HDMI ye-Sony BDP-S350, ama-DVD ajwayelekile angaphakanyiswa ukuze afane ne-720p, 1080i, noma i-1080p isinqumo sokuzalwa sama-HDTV. Enye ibhonasi ukuthi iBDP-S350 izophinde idlale ama-DVD aqoshiwe namafayela e-AVC-HD. Lo mdlali angaphinde afinyelele amafayela we-JPEG alotshwe kuma-Blu-ray disc, ama-DVD, noma ama-CD.
Ukudlala okujwayelekile kwe-DVD kunqunyelwe esifundeni seDVD lapho ithengwa khona (Isigaba 1 seCanada ne-US) nokudlala kwe-Blu-ray Disc kunqunyelwe kwi-Blu-ray Region Code A.
Ukukwazi ukudlala komsindo:
I-BDP-S350 inikeza kokubili ukukhokhiswa kwebhodi kwi-PCM yamanethiwekhi amaningi kanye nokukhishwa kwe-Dolby Digital, i-Dolby Digital Plus, i-Dolby TrueHD, ne-Standard DTS. Lokhu kusho ukuthi uma umamukeli wakho we-Home Theatre enamandla okufinyelela amasignali amaningi we-PCM wesiteshi nge-HDMI, ungasebenzisa ama-decoder akhethiwe ngaphakathi ku-BDP-S350. Ngesandleni, uma isamukeli sekhaya yaseshashalazini sinezikhombisi-ndlela zangaphakathi ezakhiweni ezingenhla, ungasebenzisa i-receiver, esikhundleni salokho, ukucacisa wonke amasignali wokufaka umsindo.
Ukukwazi ukudlala komsindo - Ukufinyelela i-DTS-HD Bitstream:
Nakuba i-BDP-S350 ingahlola umsindo we-DTS-HD kwi-disc ye-Blu-ray, ayikwazi ukucacisa lesi siginali ngaphakathi bese uyiguqula kwi-PCM Multi-Channel.
I-DTS-HD ifinyeleleka kuphela nge-output stream ku-BDP-S350 nge-HDMI. Lokhu kusho, ukuthi umamukeli wakho wendawo yaseshashalazini kufanele abe nomhleli we-DTS-HD owakhelwe ngaphakathi ukuze afinyelele le fomethi yomsindo. Uma umamukeli wakho engakwazi ukucacisa ukungena kwe-DTS-HD, umamukeli angakwazi ukukhipha isignali yomsindo we-DTS 5.1.
Izinketho zokuxhumeka kwevidiyo:
Imiphumela yenkcazelo ephakeme: I- HDMI eyodwa (i-hi-def video ne-audio incompressed audio) , ukuhambisana kwevidiyo ye- DVI - HDCP ne-adaptha.
QAPHELA: Isixazululo esingu-1080p singatholakala ngokusebenzisa imiphumela ye-HDMI. I-BDP-S350 ingakwazi ukukhipha ama- 1080p / 60 noma ama-1080p / 24 amarekhodi ohlaka. Izinqumo ze-720p nezingu-1080i ze-Blu-ray discs nazo zingatholakala ngeziphakamiso zevidiyo ze-Component. Ukuze uthole okwengeziwe ekufinyeleleni isinqumo se-1080p ku-TV yakho, hlola isihloko sami se- 1080p nowe .
Imiphumela ecacile yevidiyo yevidiyo: Ividiyo ye-Component (iqhubekela phambili noma ixhunyanisiwe) , i- S- Vidéo , nevidiyo evamile ehlanganisiwe .
Izinketho zokuxhumeka komsindo:
Imiphumela yomsindo ihlanganisa i-HDMI (okudingekayo ukuze ufinyelele ku-PCM yamanethiwekhi amaningi engaxhunyiwe, i-Dolby TrueHD, noma i-DTS-HD), iziphumo ezimbili zesiteshi se-analog stereo, i- digital optical , ne- digital coaxial .
I-Sony BDP-S350 inokulawula okulula, nge-wireless control remote kanye namamenyu ekhredithi, yalezi ziminganiso ezilandelayo: Ukulinganisa, ukukhetha okukhiphayo kwe-720p / 1080i / 1080p, Qalisa kabusha i-Play, nanoma yimiphi imisebenzi ye-Disc navigation ekhona - njengemibhalo engezansi, umsindo izintandokazi, ukukhethwa kwemenyu okusebenzisana, imisebenzi yokubuka ibhonasi, njll ...
Qaphela: Ukuze uhlolisise i-BD-PS350, hlola igalari yami yezithombe
Ukufinyelela Okuqukethwe Okuphezulu Okuqukethwe:
Kuye ngekhophi-ukuvikelwa, ukukhishwa kwencazelo ephezulu kungatholakala kalula nge-HDMI okukhiphayo.
Noma kunjalo, uma i-disc ingenayo ikhophi yokuvikela ephelele, ingavumela ukukhishwa ku-720p noma ngo-1080i ngesinqumo sevidiyo. Isixazululo se-1080p singatholakala kuphela nge-HDMI okukhiphayo.
Ukufinyeleleka kokukhipha okuphezulu okuvela kumdlali we-Blu-ray ngokubili imiphumela ye-HDMI ne-Component Video kunqunywe yi-studio ngayinye esimweni sokwethenjelwa.
Ukutholakala - Amanani
I-Sony BDP-S350 iyatholakala nge-MSRP ye $ 399, kodwa ingatholakala itholakala kakhulu, okwenza kube nenani elihle. Qhathanisa amanani
I-Sony BDP-S350 inikeza izici ezisebenzayo, eziphambili, ezilalelwayo namavidiyo ngenani elingabizi.
Noma kunjalo, i-BDP-S350 ayinayo inketho ye-analog yomsindo wesiteshi esingu-5.1, okungaba enye indlela yokufinyelela i-PC, i-Dolby TrueHD engaxhunyiwe, ne-DTS-HD kuma-receiver yasekhaya angenayo ikhono lokufunda le-HDMI noma elingenalo ube nokuxhumana kwe-HDMI nhlobo.
Ngakolunye uhlangothi, i-BDP-S350 inikeza i- HDMI 1.3 . Lokhu kunikeza ikhono elikhudlwana lokudlulisa amafayela aphezulu okulalelwayo namavidiyo phakathi komthombo womthombo, njenge-BDP-S350 kanye nomamukeli wendawo yaseshashalazini kanye / noma i-HDTV enesixhumanisi se-HDMI 1.3. Ngaphezu kwalokho, i-HDMI 1.3 iphinde ihambisane nezinguqulo zangaphambilini ze-HDMI. Ngamanye amazwi, uma usebenzisa isidlali se-Blu-ray Disc esihlome ngekhono lokukhishwa kwe-HDMI 1.3, usengakwazi ukuxhumeka kumbukeli we-TV noma we-Home Theatre onamandla okuqala we-HDMI.
Enye into ekhuthazayo mayelana nalesi sidlali ukuthi iyathuthukiswa kuma-Profile 2.0 (BD-Live). Ukuthuthukiswa kulindeleke ukuthi kutholakale emuva konyaka kulo nyaka (2008) .
Kulabo abakwa-Eco-conscious, i-BDP-S350 inikeza izici eziningana zokulondoloza amandla, uma kuqhathaniswa nemodeli ye -BDP-S300 yangaphambilini ye-Sony, njengokuthi: 21% ukusetshenziswa kwamandla aphansi ngesikhathi sokudlala nokusetshenziswa kwamandla angaphansi kuka-43% kwimodi yokulinda. Futhi, enye indlela u-Sony eyehlise umthelela wezemvelo we-BDP-S350, ukuthi ubukhulu bayo buye buyancipha ngamaphesenti angu-55, okuye okwehlise isisindo salo ngo-38%, futhi izidingo zalo zokupakisha ngu-52%. Manje akudingeki uzizwe unecala nge-Panel Flat esebenzisa amandla enamandla, iThelevishini, noma iprojector yevidiyo, vele-uyibeke nge-Eco-friendly Blu-ray disc player.
Uma ungazange uqhubekele ku-Blu-ray okwamanje, amanani kokubili abadlali namachashaza wehla, futhi abathengi bayaphendula. Kuze kube manje, i-Blu-ray ibona izinga lokutholwa okusheshayo kune-DVD ejwayelekile eyenzeka phakathi neminyaka yokuqala kokubili kuya kweyithathu yokutholakala. Enye into okufanele ibeke abathengi kalula nge-Blu-ray, yilabo bonke abadlali be-Blu-ray Disc, kuhlanganise ne-BDP-S350 abangadlala ama-DVD ajwayelekile. Ngamanye amazwi, iqoqo lakho lamanje le-DVD ngeke liphele isikhathi njengoba iminyaka ihamba.
Uma une-HDTV, thola inzuzo enkulu kuyo yonke imali oyisebenzisile ukuyithenga. Ungakwazi ukujabulela i-hi-definition yeqiniso ye-DVD ngendlela efanele ngayo nge-Sony BDP-S350 noma kwenye i-Blu-ray Disc player.
Ukuze ubuke phambili i-BDP-S350, hlola igalari yami yezithombe kanye nencwadi yomsebenzisi kanye ne- Quick Start Guide .
I-21 Best Anime List of 2018
Indlela Yokwenza Uhlu Lwadlalwayo Lwakho Lwesabekayo ku-Spotify
Indlela Yokuthola I-Digitize Wonke Amarekhodi Wakho Ye-Vinyl Ukulalela Ukulalelwa Kwedivayisi Yefoni
Ama-Receivers aphakathi kwe-Pioneer VSX-831 no-VSX-1131
Indlela Yokusetha Izilawuli Zomzali Kumathrikhi Wokusakaza
Kungani Abanye Abadlali be-Blu-ray Disc Have Izimpendulo ze-HDMI?
I-Marantz iveza i-NR1607 I-Slim-Profile Home Receiver Receiver
Indlela yokuvala i-Apple yakho ye-TV
Software Software Editing Software
Okufanele Ukwazi Ngomyalo Wokuthanda
Amasayithi Apholile Wokubona Umsebenzi Wentandokazi Emhlabeni Wonke
Izindawo Zokuxhumana Ezindawo Zokuxhumana Eziphezulu Zisebenzisa
Indlela Yokuhlanza Ikhamera Yakho Yedijithali
Indlela yokulungisa i-Comctl32.dll Ayitholakali noma Ayiphutheli Amaphutha
Indlela Yokuguqula Ngokuzenzakalela Umculo ku-WMP 11
Indlela Yokunika amandla iKlayenti yeMicrosoft Networks
I-TCL Yakha i-Roku TV Line ngo-2015
Ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza lwe-Uber: Isevisi Yomshayeli Wezinkampani Ezizimele Zendawo Yasekhaya
Udinga ukusheshisa: Okufunwa kakhulu U - Ukubuyekezwa Kwegeyimu ye-Wii U
Ukubuyekeza kwekhalenda ye-Google Online
Izikole ze-International Graphic Design
Ukukhetha Ukulungiswa Okulungile kwe-Microsoft SQL Server 2012
Indlela Yokushintsha Isixhumanisi Sibeka ekhasini lewebhu
Ama-Best Ringtone Ringtone amawebhusayithi
Amandla nobuthakathaka bePSP Amamodeli
AmaReceivers aKwasezingeni eliphezulu lakwaMakhaya e-Mid-Range - 2018